Mpanamboatra sy mpanamboatra tenimiafina anti-UV tsara indrindra PP Spunbond Nonwoven mpanamboatra sy orinasa | Henghua
Ny lamba 100% PP tsy tenona dia mandray PP-anti-UV vaovao, manana toetran'ny UV sy anti-fahanterana izy. Aorian'ny fampidirana mivantana ireo akora, dia afaka misoroka tsara ny tampon'ny lamba tsy voatenona polypropylene tsy hihamaizina noho ny fahanteran'ny fitaovana. Pp Nonwoven lamba manohitra UV dia mety ho 1% -5%, ny vanim-potoana fanoherana ny fahanterana dia mety ho eo ambanin'ny tontolo iainana amin'ny masoandro. mandritra ny 1 -2 taona.
Ny lamba 100% PP tsy tenona dia mandray PP-anti-UV vaovao, manana toetran'ny UV sy anti-fahanterana izy. Aorian'ny fampidirana mivantana ireo akora, dia afaka misoroka tsara ny tampon'ny lamba tsy voatenona polypropylene tsy hihamaizina noho ny fahanteran'ny fitaovana.
Pp Nonwoven lamba manohitra UV dia mety ho 1% -5%, ny vanim-potoana fanoherana ny fahanterana dia mety ho eo ambanin'ny tontolo iainana amin'ny masoandro. mandritra ny 1 -2 taona.
Lamba tsy vita amin'ny kofehy tsy manenon-tena ampiasaina amin'ny fambolena / greening / fonony / fanaraha-maso ny ahidratsy
Ny lamba tsy tenona dia manana grama (hateviny) maro samihafa ary fiasa samihafa amin'ny fiarovana, fitehirizana ny hafanana ary ny fidirana (ialana) amin'ny hazavana.
Ny lamba tsy tenona Spunbond dia manana fahamendrehana tsara, fihetseham-po malefaka, fividianana rivotra lehibe, tondra-drano avo lenta ary tanjaka tsara.
Vita tamin'ny 100% Polypropylene / 2% ~ 5% anti-UV, androm-piainana lava kokoa / tanjaka tsara sy lava / Fihetseham-po malefaka, tsy misy fotony, exo-friendly ary azo averina / Moth-proof, fanaraha-maso ny ahidratsy
Tombony ho an'ny fanoherana ny UV:
1.Nonwoven miaraka amin'ny anti-uv dia miaro ny voankazo amin'ny hazavan'ny masoandro sy ny vorona.
2. Manana ny tanjaka mando izy mahazaka ny rivotra sy ny orana;
3. Mampihena amin'ny fomba mahomby ny fotoana fitomboana ary mampitombo be ny vokatra;
4. Tsy misy fanafody famonoana bibikely na zavatra simika hafa ao anaty kitapo, izay sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy fandotoana;
5. Endri-javatra isan-karazany azonao averina ampiana amin'ny lamba: anti-ultraviolet (1% -5%),
6. Mavesatra maivana, kitapo misy voankazo vita amin'ny faric azo ampiasaina indray.
Gardening ， Indostrian'ny fonosana ， Indostrian'ny fambolena sy ny lanscape
Teo aloha: Ny toetran'ny mpamono afo PP Spunbond Nonwoven
Manaraka: Ny toetran'ny anti-static PP Spunbond Nonwoven
lamba manohitra UV
Pp lamba tsy tenona, Fitaovana tsy tenona, Lamba tsy tenona, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Vidin'ny lamba lamba,